Somaliland oo xukun ku riday Boqor Buur-madow | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Somaliland oo xukun ku riday Boqor Buur-madow
Somaliland oo xukun ku riday Boqor Buur-madow
Maxkamadda Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Maamulka Somaliland ayaa maanta xukun Shan sano oo xabsi ah waxa ay ku riday Boqor Cusmaan Muxumed Maxamed (Boqor Buur-madow)
Ciidamada Booliska Maamulka Somaliland ayaa 20-kii bishan waxa ay xilli habeen ah xireen (Boqor Buur-madow) oo xilligaasi ka soo laabtay Munaasabad isir dhaqan aheyd oo lagu qabtay Puntland.
Boqor (Buur-madow) ayaa intaasi kadib waxaa xabsiga looga sii daayay qaab damiin ah, kadib markii ay damiinteen qaar ka tirsan eheladiisa iyo dad reer Somaliland ah, bale waxaa lagu balamay in Maxkamadda lagu horkeeno Dacwad ay u heysatay Somaliland oo maanta Maxkamad lagu saaray.
Boqorka ayaanan helin wax qareen ah oo difaacayay, waxaana ehelada (Buur-madow) ay Somaliland ku eedeeyeen in dhacdadan ay tahay mid ka baxsan sharciga, ayna ku xad gudbeen xuriyada qofka bani’aadamka ah.
Eedaha ugu waa weyn ee loo heysto Boqorka ayaa waxaa ka mid ah in Magaalada Carmo uu kaga qeyb galay Caleema saarka mid ka mid ah Duqeyda dhaqanka Puntland iyo inuu ku xadgudbay Ciidanka Difaaca Somaliland.
Somaliland ayaa cadaadis iyo caburin ku heysa dadka magaca leh ee sida weyn looga yaqaano degaanada Somaliland, marka ay tagaan dhulka Koonfurta, oo ay sheegaan wax aan qancin madaxda xilka ka heysa Maamulkaasi.